Wax Bini Aadamnimo Ah Ma Lihidin, Maskax Ma Lihidin, Bilaa Ixtiraam,Jaahiliin Ah Oo Aan Waxba Ahayn Ayaad Tihiin Haddii......... - Gool24.Net
Wax Bini Aadamnimo Ah Ma Lihidin, Maskax Ma Lihidin, Bilaa Ixtiraam,Jaahiliin Ah Oo Aan Waxba Ahayn Ayaad Tihiin Haddii………
March 21, 2020 Mahamoud Batalaale
Waxaa lagu jiraa waqtigii ugu xumaa muddo dheer oo uu aduunku u kala xidhmay saamaynta caabuqa coronavirus, laakiin waxaa wali jira dad aan u hogaansamin tilmaamaha caafimaad ee ay bixisay hay’da caafimaadka aduunka ee WHO.
Difaaca kooxda Liverpool ee Dejan Lovren ayaa fariin canaan ah u soo diray dadka aan u hogaansamin tilmaamaha caafimaad ee la doonayo in lagu xakameeyo caabuqa coronavirus isaga oo waliba adeegsaday halmado badan oo isku xidhan.
Lovern ayaa arkay dad badan oo meel laga qaxweeyo iskawada fadhiya dalkiisa Croatia, wuxuuna ku canaantay in ay yihiin kuwo jaahiliin ah oo aan ixtiraamin halista dadkooda laga badbaadinayo ee coronavirus isaga oo waliba qoraal dheer soo saaray.
Dawlada UK ayaa jimcihii xidhay goobo ay ka mid yihiin maqaaxiya cuntooyinka, baararka iyo meelo ay dadku iskugu iman jireen, si loo yareeyo saamaynta coronavirus looguna guulaysan karo xakamayntiisa.
Jimcihii shalay waxaa la shaaciyay in dalka Talyaaniga oo kaliya ay cudurka coronavirus u dhiteen 627 qof intii lagu jiray 24 kii saacadood ee waqtigaas ugu danbeyeay, waxayna noqotay maalintii ugu xumayd aduunka ee tiro intaas leegi ay hal maalin u geeriyoodeen fayraskan halka dhimashada guud ee Talyaanigu ay sare u dhaaftay afar kun oo qof.
Iyada oo xaaladu cakiran tahay ayuu Dejan Lovern arkay dad meel iskugu yimid oo aan u hogaansamin go’aankii lagu mamnuucayay in dadku goobo iskugu soo ururaan wuxuuna soo qoray fariin wayn oo ay warbaahinta England soo dhawaysay.
Dejan Lovern ayaa qoraalkan dheer soo raaciyay sawirka uu ka cadhooday ee ay dadkani sida wada jirka ah u fadhiyaan wuxuuna yidhi: “Dadyahow maxaa idinka qaldan? Ha noqonina danaystayaal. Miyaad xataa fahansan tihiin xajmiga ama qiyaasta dhibaatada iyo dhibanayaasha ay shaqaalaha caafimaadku noo soo bandhigayaan?”.
Dejan Lovern oo canaantii ugu adkayd soo jeedinaya ayaa yidhi: “Wax bini aadamnimo ah ma lihidin haba yaraateem, bilaa maskax ayaad tihiin, bilaa ixtiraam ayaad tihiin, jaahiliin ayaad tihiin. Waxba ma tihidin idinku”.
“Haddii aad sugaysaan in aad dib u eegtaan Croatia dhawr bilood kadib, waa wax cadaan ah inta aan diyaarka u nahay, nasiib daro qalab ku filani ma yaalo. Waxay ceeb ku tahay dhamaan kuwa maanta jabiyay isxakamayntii go’doominta ahayd ee maalmahan”. ayuu Lovern hadalkiisa raaciyay.
Dejan Lovern ayaa canaanta uu kooxdan dadka ah ee dalkiisa Croatia halista galin karta u soo jeediyay ku daray: “Halka qaar kale ay naftooda madaxa kuugu soo tuurayaan, ayaad idinkuna halkaas iska fadhidaan idinka oo bun ama coffee cabaya. Ceeb!”.
Hadalka Lovern ayaa ah mid si wayn loo soo dhaweeyay maadaama oo uu muujiyay in uu u damqanayo dalkiisa Croatia oo uu sheegay in ayna haysan qalab caafimaad oo ku filan si ay ula tacaali karaan coronavirus balse waxa uu aaminsan yahay in u hogaansamida tilmaamaha caafimaad ay tahay mid muhiim ah.
Si kastaba ha ahaatee, qof kasta oo fariintan akhrisanaya meel kasta oo uu joogo waxaa ku waajib ah in uu raaco tilmaamaha caafimaad ee aduunku doonayo in lagu xakameeyo saamaynta coronavirus iyada oo lagu jiro waqti aad u adag oo uu aduunku kala xidhmayo.